Windows မှာ Android SDK ကိုအလွယ်တကူဘယ်လို Install လုပ်မလဲ Androidsis
နောက်ဆောင်းပါးတွင်ကျွန်ုပ်သည်ဗွီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုအားအမြင်အာရုံဖြင့်ပံ့ပိုးထားသည့်သင့်အားပြသမည် Windows7မှာ Android SDK ကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲ.
အဆိုပါသင်ခန်းစာအခြေခံသည်ပေမယ့် en Windows ကို 7ငါတို့အတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မည် မည်သည့်ဗားရှင်းမဆို ၏ operating system ကို၏ ကျော်ကြားတဲ့သေးငယ်တဲ့ပြတင်းပေါက်များ.
1 Android SDK ဆိုတာဘာလဲ။
2 SDK ကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာကိုအောင်မြင်ချင်ပါသလဲ။
3 Android SDK ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်
Android SDK ဆိုတာဘာလဲ။
SDK ကို များအတွက်အတိုကောက်ဖြစ်ကြသည် Sထူးအိမ်သင် Dဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု Kထိုသို့ Google ကဖြန့်ချိတဲ့ software ကိုအထုပ်, ငါတို့ကိုကူညီလိမ့်မယ် Android ပလက်ဖောင်းအတွက်အပလီကေးရှင်းနှင့်ပရိုဂရမ်များကိုဖန်တီးပါသို့မဟုတ်ပင် တစ်ခု emulator ကို install လုပ်ပါ မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်ကျော်ကြားသောသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကုမ္ပဏီမှဖန်တီးထားသောလည်ပတ်စနစ်ကို virtual နည်းလမ်းဖြင့်လည်ပတ်ရန်။
ကို install လုပ်ပါ Android SDK ငါတို့အတွက် Windows ကိုကျနော်တို့နိုင်ပါလိမ့်မည် မည်သည့် Android ဗားရှင်းမဆိုတုပပါ, ငါတို့သည် install နိုင်ပါတယ် Android ဗားရှင်းများရှိသလောက် virtual machine များကဲ့သို့ဖြစ်သည်.
ဤသည်သည်လူကြိုက်များပြီးကျယ်ပြန့်သောမိုဘိုင်းလည်ပတ်မှုစနစ်၏လောကတွင်စတင်ရန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ကမ္ဘာကြီးသို့စွန့်စားထွက်ခွာနိုင်သည်။ Android အတွက်အပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများကိုဖန်တီးသည်။
install လုပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ရှာသောရည်ရွယ်ချက် Android SDKနောက်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတစ်ခုမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ install လုပ်ပြီးတုပပါ လမ်းမှန်ထဲမှာ အဆိုပါဖျောပွ operating system တစ်ခုဗားရှင်းနှင့်ထူးဆန်းသည့် application ကိုပင်ထည့်သွင်းပါ။
Android SDK ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်
ပထမ ဦး ဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည် Java JDK ကိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ပါသောကြောင့် ဂျာဗား ၎င်းသည် operating system အတွင်း၌မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် အန်းဒရွိုက်.
ဒုတိယလိုအပ်ချက်မှာ၎င်းမှာရှိရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည် အဆိုပါဖျောပွဖှံ့ဖွိုးတိုးတ software ကိုအထုပ်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်း အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး Google.
ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းမည့်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းမှာထားရန်အကြံပြုပါသည် Ram မှတ်ဉာဏ်အနည်းဆုံး 1Gbငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအကြံပြုမယ်လို့ပေမယ့်, အနည်းဆုံး 2Gbရှိသည် Windows ကို install လုပ်တယ်, ဖြစ်နိုင်ရင် Windows ကို7နှင့်အသစ်သောအရာတို့ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်သင်ယူရန်စိတ်အားထက်သန်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Androidsis တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းကို Play စတိုးတွင်ရနိုင်သည်.
ဒေါင်းလုပ် - ဂျာဗား JDK, Android SDK
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Android ဗားရှင်း » Windows7မှာ Android SDK ကိုဘယ်လို Install မလဲ
Acer Iconia Tab A700: HD မျက်နှာပြင်အပြည့်အစုံဖြင့်မြင်ကွင်း